Ny karatra tariby Bill Gates ny karatra tariby tsy misy tariby izay manara-maso raha manana coronavirus ianao ary na efa nahavita vaksiny: Martin Vrijland
Ny karatry ny taratasim-bolan'ny Bill Gates dia ny karapanondro ID tsy misy tariby izay manara-maso raha manana coronavirus ianao ary na nahavita vaksiny.
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 23 Martsa 2020	• 7 Comments
Nandritra ny fivoriana Reddit 'manontany izay tianao', dia nanontany i Bill Gates momba ny valan'aretina covid-19 coronavirus. Hita ny valiny. Hoy izy,Amin'ny farany dia hanana fanamarinana dizitaly maromaro isika mba hampisehoana hoe iza no nanamboatra na nosedraina tato ho ato ary iza no nahazo vaksiny."Amin'ireo fanamarinana nomerika ireo, i Bill Gates dia afaka manondro, ohatra, ireo novolavolain'ny MIT quantum dots (teboka kofehy).
Ny vahaolana an-tariby toy izany dia toa mandeha matetika miaraka amin'ny fampidirana ID2020, izay te hanome olona 1,2 miliara izay mbola miaina nefa tsy manana karatry ny karapanondro (tsy manana izany tsy misy isa). Bill Gates dia mpamatsy vola lehibe ao izany rehetra izany tamin'ny alàlan'ny fananganana an'i Bill & Melinda Gates ary raha ny tena mazava dia mandroso isika dia mizotra mankany amin'ny rafitra fanaraha-maso izay hokosain'ny maro noho ny tahotra ny fahavalo tsy hita maso.
Zava-dehibe ny hanehoana fa vonona ny hanolotra ny fahafahany rehetra raha matahotra ny tenany. Ny tahotra tsara indrindra dia ny tahotra ny fahafatesana, ary rehefa miatrika fahavalo tsy hita maso isika izay miantso antsika rehetra ny manam-pahaizana ara-pitsaboana sy haino aman-jery ary mpanao politika, dia miandany ao aoriana ny ankamaroan'ny olona.
Ny ankamaroany dia tsy mahalala ny mety ho azon'ny governemanta sy ny haino aman-jery atao amin'ny besinimaro. Avy eo, betsaka loatra ny olona tsy maintsy mandainga. Tsy misy olona afaka mieritreritra fa ny ankamaroan'ny radara anaty famantaranandro dia tsy mahita ilay fitarainana ary noho izany dia tsy manana ny heviny manokana. Tsy misy olona afaka mino fa efa maro no efa nifanarahana, miaraka amin'ny sakafo hohaniny sy ny ho avy (heverin'izy ireo fa efa nividy).
Tena mahatsiravina tokoa ve izany coronavirus izany? Avy eo, azo antoka fa ilaina ny mahafantatra hoe iza no voan'ny aretina, rehefa misy olona sitrana ary na nisy olona voan'ny vaksiny. Izany farafaharatsiny, izany no finoana apetraka amin'ny vahoaka. Ny azo atao ambany dia raisina am-panajana. Io faharatsiana io dia hita ho toy ny fisainana negativisme sy fisainana tsikombakomba.
Ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, na iza na iza manakiana dia mety ho hita ho mampidi-doza ho an'ny fiarahamonina mihitsy aza. Izany dia satria mety hikomy sy manimba ny hafa ny olona; na dia efa manaraka ny 'hevitra diso' aza izy. Noho izany fanalahidy. Rehefa dinihina tokoa, ny hetsika fikarakarana ara-pahasalamana ho an'ny GGZ dia efa miasa sahady amin'ny 1 Janoary.
Raha afaka volana vitsivitsy, dia miova amin'ny demaokrasia mahamenatra isika ho rafitry ny kaomionista teknolojia ao anatin'ny volana vitsivitsy amin'ity krizy coronavirus ity, miankina amin'ny fanjakana ny tsirairay avy amin'ny resaka fidiram-bola (jereo ity fanazavana ity). Io karaoty eo anoloana antoka ara-bola io dia handresy lahatra ny maro ao anatin'ny fotoan'ny tahotra. Ny tahotra mahatsiravina momba ny fahafatesana sy ny habetsahan'ny fahafatesana (nasehon'ny fampahalalam-baovao) dia hamoaka lalana ho an'ny fepetra draconiana, izay ahafahana esorina ireo singa mampidi-doza avy amin'ny fiaraha-monina (tsy misy fitomaniana).
Avy eo, ny ampahany sisa amin'ny mponina dia ho tafintohina amin'ny rafitra nomerika izay manara-maso ny hetsika rehetra, mampifandray ny vola sy ny fandaniana ary ny fahalalahana mihetsika amin'ny fihetsika, fahasalamana ary fanafody an-tery ary fanaovana vaksiny. Izay noheverin'izy ireo fa hiantoka ny fahafahany sy ny filaminany amin'ny alàlan'ny fikaon-tanana ny fanampiana ny fanjakana (na miady amin'ny politikan'ny fanjakana noho ny tahotra na fitiavan-tena) dia mety voafandrika ihany koa izy ireo. Tsy misy na inona na inona mijoro amin'ny lalana farany.
Azafady vakio koa ny lahatsoratra hatramin'ny herinandro lasa, izay hanazako ny antsipirihany momba ny toe-javatra etsy ambony. Raha efa namaky ny bokiko sy ny famoahana azy ianao dia ho hitanao fa tsy mila karatra ID, teboka fametahana ID na inona na inona amin'ny tena toetranao marina. Azonao atao koa ny mahita ny fanantenana ho an'izay rehetra tonga saina.
Lisitry ny rohy loharano: siencemag.org, id2020.org, biohackinfo.com
Bill Gates 2017: "Ny areti-mifindra manaraka dia mety niainga teo amin'ny efijery finday"
Tags: Bill, Coronavirus, Covid-19, teboka, Featured, Foundation, Gates, ID2020, Melinda, areti-mifindra, atsangana hitondra, Reddit
24 Martsa 2020 ao amin'ny 01: 28
Ny tamba-jotra Bill Gates dia mitarika ho an'ireo ahiahiana efa mahazatra, ny ampahany amin'izany dia mamatsy vola an'i Microsoft, Gavi Unilever, Carbyne, Postcode Loterij, izay farany dia tsy mihoatra ny fikambanana eo alohany.
Nisy mpitsikilo iray lehibe ao amin'ity tambajotra ity izay mety hifandraisany amin'i Epstein efa hita tampoka tato ho ato.
raha tsorina dia misy vahaolana-vahaolana-vahaolana
24 Martsa 2020 ao amin'ny 01: 29
24 Martsa 2020 ao amin'ny 10: 44
@Salmon, tsy mahagaga ahy raha mahita ny ataon'ilay haresita ianao.
24 Martsa 2020 ao amin'ny 12: 40
tena mahaliana ity rohy ity miaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny Communitarian, voamarina avy amin'ny fantsona samihafa.
Fanadinadinana: Raha sendra tsy voamariky ianao dia ity dia fahazoan-dàlana amin'ny West Wide
Ny Drafitra Vaovao Maneran-tany fampiharana ny Agenda 2030 sy ny 'Communitarianism', izay Komonisma 2.0 fotsiny.
24 Martsa 2020 ao amin'ny 16: 01
Azo antoka fa tafiditra ao i Unilever noho ny hetsika vao haingana, tsy avy any Unilever ve i Rutte?
Tany Amerika koa izy ireo dia nampiditra avy hatrany ny Fanitsiana ny Lalàna, mampahatsiahy ahy ny lalàna Patriot. Fa io dia mazava ho azy fa ho kisendrasendra ihany 😉
26 Martsa 2020 ao amin'ny 02: 11
Fauci: 'Tsy isalasalana' i Trump dia hiatrika ny fihanaky ny areti-mifindra
Janoary 11, 2017
Anthony S. Fauci, MD, talen'ny National Institute of Allergy sy ny Areti-mifindra, dia nilaza fa tsy misy “misalasala” i Donald J. Trump hiatrika aretina fihanaky ny areti-mifindra mandritra ny filohany.
27 Martsa 2020 ao amin'ny 05: 44
Hisy ny fipoahana tsy ampoizina
« Coronavirus, fikambanana iray izay manamafy orina sy mahazo ny maha-olona?
Aza hadino fa ny horonantsary Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) dia fandrika vaovao sandoka »
Total visits: 1.204.790
Fakafakao op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, ny fanakatonana lalina sy ny internet amin'ny 1 aprily?
ellysa op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, ny fanakatonana lalina sy ny internet amin'ny 1 aprily?
Harry mampahafaty op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, ny fanakatonana lalina sy ny internet amin'ny 1 aprily?
Zandi Eyes op Coronavirus, Q Anon, Trump, Bolsonaro, BoJo, ny fanakatonana lalina sy ny internet amin'ny 1 aprily?